Birtukaan Miidhagsaa hoggantuu Boordii Filannoo ta'uun muudaman - BBC News Afaan Oromoo
Birtukaan Miidhagsaa hoggantuu Boordii Filannoo ta'uun muudaman
22 Sadaasa 2018
Madda suuraa, Waajjira MM
Hoggantuun paartii mormituu duraaniifi falmituun mirga namoomaa Aadde Birtukaan Miidhagsaa Walitti-qabduu Boordii Filannoo Biyyaaleessaa ta'anii muudaman.
Manni Maree Bakka Bu'ootaa Uummataa Yaa'ii isaa Idilee 5ffaa gaggeesseen muudama Ministirri Muummee dhiyeessan sagalee caalmaan mirkaneessee jira.
Aadde Birtukaan waggoota sadan darbaniif miseensa dhaaba siyaasaa kamiiyyuu akka hin taane mirkaneeffanneerra jedhan MM Abiya Ahimad gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'eef deebii yoo kennan.
''Ammaan booda yeroon jiru yeroo gaarii ta'a''
Dhiyeenya kana gara biyyaatti kan deebi'an Aadde Birtukaan Miidhagsaa A.L.I filannoo bara 1997 ture irratti paartii Qindoominaa bakka bu'uun dorgomaa turani.
Muudamni isaanii amma kun marsaalee hawaasaa irratti falmii kaasee jira.
Namoonni hedduun hoggantuu duraanii paartii siyaasaa ta'uu isaanii eeruun walaba ta'uu isaanii irratti gaaffii kaasu.
Gariin ammoo 'Kan gubatetu beeka' akkuma jedhan rakkoo filannoon wal qabateen nama miidhaan irra gahe waan ta'aniif bakkichaaf nama sirriidha jedhu.
'Filannoowwan ilaalaa turre'
MM Abiy Ahimad seerota biyyattii gara garaa fooyyessuuf jecha mana maree sirna haqaa fooyyessu hundeessanii turan.
Mana maree kana jalatti ammoo gareen Boordii Filannoofi seera filannoo fooyyessu, akkasumas haala Komishiniin mirga namoomaa, Dhaabbati Abba-Gaar uummataafi Manni maree Federeeshinii itti jiran qoratu maqaa Dhaabbilee Dimokiraasii jedhuun dhaabbate jira.
Gareen kun adda durummaan Boordii Filannoofi seera filannoo fooyyessuuf xiyyeeffannaa kennee hojjetaa jira jedhu qindeessaan garicha Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisan seeraa Dr. Geetachew Asaffaa.
Hojilee hojjetamaa turan keessaa tokko haala hogganaan Boordii Filannoo Biyyaalessaa itti filamu ta'uu dubbatu.
Hogganaan Boordii Filannoo kallatiin Ministira Muummeen muudamuu caalaa paartileen siyaasaafi qaamoleen dhimmichi ilaallatu qooda keessatti fudhatanii erga filamee booda MM mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessee osoo ragga'e yaada jedhu qabna ture jedhu.
Muudama Aadde Birtukaan Miidhagsaa akka quba hin qabneefi "nuyi wanti dhiyeessine hin jiru, filannoowwan ilaalaa turre" jedhu.
Boordii Filannoo Biyyaalessaa gara komiishiniitti jijjiiruu mariin eegalamee akka jiruufi walumaagalatti seera boordiin Filannoo ittiin bulu fooyyessuuf hojiin hojjetamaa jiras jedhu.
Baqattoonni Itoophiyaa Kaartum jiraatan rakkoo hamtuu keessa jiraachuu himatan
Ameerikaan ilmi mootii Saawudii Kashoogjiin akka ajjeefamu eeyyama kenne jette
Hospitaalli Landmark dandeettii Obbo Jawaarfaaa Qaallittiitti yaaluu hin qabnu jedhe
'Ajajni manneen murtii kabajamuu dhabuun gufuu ol-aantummaa seeraa mirkaneessuu ta'aa jira'
25 Guraandhala 2021
Ertiraan Itoophiyaafi Sudaan waldhabdee daangaa karaa nagaa akka furaniif gaafatte
Bulchaan mana sirreessaa Qaallittii mana murtiitti dhiyaatan
'Mohaammad Deeksisoo atattamaan hidhaatii gadhiifamuu qaba' - Komishinii
Hidhamuu aanga'oota ABO irratti 'qaama dhimmi ilaalu waliin' dubbachaa jirra-Boordii Filannoo
24 Guraandhala 2021
Sudaan himannaa Itoophiyaatiif deebii kennite
21 Guraandhala 2021
Manni murtii dhimma yaala Obbo Jawaarfaa irratti oliyyannoo Abbaa Alangaa Waliigalaa kuffise
23 Guraandhala 2021
Paartileen duula filannoo eegaluu isaanii beeksisan
22 Guraandhala 2021
Baayidan dhimma Itoophiyaa irratti Pirezidanti Keeniyaa waliin mari'atan
Hidhamtoonni 400 ol mana hidhaa keessaa miliqan
Loltoonni Kaameroon 'haaloo ba’uuf dubartoota gudeedan'
Ajajni mana murtii kabajamuu dhabuu irratti manni murtii Waliigalaa Oromiyaa maal jedhe?